प्रेम–वृत्तान्त | Nagarik News - Nepal Republic Media
– मुस्काउँदा, मुस्कानमै प्रेम
– बोल्दा, आवाजमै प्रेम
– गाउँदा, गीतमै प्रेम
– नाच्दा नृत्यमै प्रेम्
रोकेर कसले रोक्न सक्छ ? छेकेर कसले छेक्न सक्छ ? प्रेमको बीचमा सातसमुद्र बगाऊँ वा अग्ला–अग्ला पर्वतमाला वा पूरै हिम–शृंखला ठड्याऊँ ! अहँ, साम्य हुँदैन प्रेमको आवेग।
– हेराइमा प्रेम,
– स्पर्शमा प्रेम,
– आलिङ्गनमा प्रेम,
– चुम्बनमा प्रेम।
यतिसम्म कि कुनै विद्वान्ले कतै सोधेकै छन्– ‘प्रेममा शरीर अप्रासङ्गिक छ र ?’
यस अर्थमा अनुमान लगाउन सकिन्छ– प्रेम भनेको अनुभूतिको विषय हो। माया–प्रीतिको सन्दर्भमा प्रेमको उत्पत्ति हुन्छ। भनून् त कसैले– प्रेमबिना को बाँच्न सक्छ हँ दुनियाँमा ? प्रेम छ र’त श्वास छ, प्राण छ। प्रेम छ र’त जीवन छ।
माइलौँ माइल प्रति–मिनेटको रफ्तारमा हवाइजहाज उडिरहेछ आकाशमा। र, त्यही हवाइजहाजभित्रै, विवशताले आफ्नी प्रेमिकालाई छाडेर विदेश जाने कुनै प्रेमी सवार छ। अनुमान गर्न सक्छन् कसैले– उसको प्रेम–आयतन नाप्ने मापदण्ड कहाँ छ, कोसँग छ ?
– बतास चल्छ चिसो, प्रेमबिना बहने बतास के बतास ?
– घाम लाग्छ घमाइलो, प्रेमबिनाको घामको न्यानो के न्यानो ?
– साँझ चन्द्रमा उदाउँछ, प्रेमको शीतलता नभएको चन्द्रमाको केको रौनकता ?
– प्रेम छैन भने ताराहरू चम्किनुको के अर्थ ?
झरना प्रेमको। छहरा प्रेमको। नदीनाला प्रेमको। डाँडाकाँडा, पाखा–पर्वत, कुनाकन्दरा प्रेमको। सागर प्रेमको। सगर प्रेमको। सबै प्रेमको। यो ब्रह्माण्डै प्रेमको। प्रेम... सर्वव्यापी !
– बालक रहँदा, प्रेम– स्नेहको
– जवान छँदा, प्रेम– यौवनको
– वृद्ध हुँदा, प्रेम– सहानुभूतिको
– र, चितामै जल्दाजल्दै पनि प्रेम– आँसुका थोपाहरूको।
प्रेमका रूप अनेक। अलग–अलग प्रेमको स्वरूप।
खोज्दैमा कहाँ पाइन्छ प्रेम ? माग्दैमा कहाँ पाइन्छ ? स्वनिर्मित प्रेम ! आँखा हुँदैन प्रेमको, शायद मस्तिष्क पनि हुँदैन; हुन्छ त हृदय हुन्छ पे्रमको जोे आपैmँ गन्तव्य निर्धारण गर्छ र आपैmँले यात्रा तय गर्छ। लाख कोशिश गरूँ– प्रेम नगरूँ !... तर नगर्दैमा प्रेम हुँदैन र ?
कुनै व्यापार गर्दैन प्रेमले, कुनै लेनदेन गर्दैन; कुनै हिसाबकिताब नै गर्दैन।
– अनुरोधमै पनि प्रेम
– स्वीकृतिमै पनि प्रेम
– सहमतिमा पनि प्रेम
– सम्झौतामा पनि प्रेम।
साँच्चै प्रेमको सामुन्ने तुलना गर्न योग्य विषय–वस्तु नै के छ र ! प्रेम नै उच्चताको सगरमाथा। प्रेम नै गहिराइको प्रशान्त महासागर। अथाह... प्रेमको आकार ! कुनै टुप्पो वा छेउको भेउ कसैले पत्ता लगाउन सक्दैन।
– कहिले कोसित डग्यो प्रेम ?
– कसको सामु झुक्यो ?
– को देखेर डरायो ?
– कसले देख्यो भागेको, प्रेम ?
कुन स्नायु ? कुन रगत ? कुन परिश्रम ? कुन पसिना ? चिन्दैन प्रेमले केहीलाई–कसैलाई। सायद यही अर्थमा प्रेम अन्धो छ, केही पनि देख्दैन। अँध्यारो–उज्यालो केही जान्दैन।
भन्छन्– प्रेम भनेको युद्धजस्तै हो। यसमा कतै–केही रोकतोक छैन, सबै जायज।
तर बुभूmन् प्रेमका व्याख्या–अपव्याख्या गर्नेहरूले ! खेल होइन प्रेम, जसले हार–जीतको चरित्रलाई उजागर गरोस् ! प्रेम त प्रेम हो, जीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलापभन्दा फरक, तर जीवनसँगै जोडिएको एउटा प्रवृत्ति।
– पुतलीको उडानमा प्रेम
– भँवराको भनभुनमा प्रेम
– माहुरीको महमा प्रेम
– माकुरीको जालमा प्रेम।
संसारमा प्रेम कसले गरेन ? र त्यहीँ, प्रेममा व्यभिचार कहाँ भएन ? इतिहासको गर्भदेखि अझैंसम्म प्रेममाथि अनेक कुकर्म हुँदै आएका छन्। त्यसको सिलसिला कहिले रोकियो र ! प्रेमको बलात्कार गर्न खोजेका छन् मान्छेले। हत्या गर्न खोजेका छन्। तर, कसले पायो सफलता ? इतिहास साक्षी छ– प्रेम कहिल्यै मरेन; मर्दैन। अनन्त, अजर छ। अमर बनेर ‘ताजमहल’ भएको छ प्रेम। वर्तमान पनि स्वयम् सामु छ उदाहरण– प्रेमको। देशसँग प्रेम गर्नेहरू जिउँदा छन्।
– कोही ‘झन्डा’सँग प्रेम गर्छन्,
– कोही ‘वर्दी’सँग प्रेम गर्छन्।
– अपवाद स्वरूप, कुर्सीसँग प्रेम गर्नेहरू पनि छन्, सत्तासँग प्रेम गर्नेहरू पनि छन्।
– बन्दुकसँग प्रेम गर्नेहरू पनि छन्।
प्रेम गर्ने दृष्टिकोण आ–आफ्नै प्रकारका छन्। प्रेम गर्ने ढङ्ग आ–आफ्नै किसिमका छन्। त्यसो त, गरिने ‘क्रिया’ नै कहाँ हो र प्रेम ! स्वतःस्फूर्त, प्रेम त आफैं हुने ‘प्रक्रिया’ हो। आफसेआफ चल्छ प्रेम, प्रकृतिप्रदत्त !
जिज्ञासा राख्न सकिन्छ– प्रेम कतै एउटा ‘मानसिकता’ मात्रै त होइन ?
आशङ्का गर्न पनि सकिन्छ– कुनै तरङ्ग मात्रै पो हो कि प्रेम ?
किन हुन्थ्यो !
प्रेम गर्नेहरू, प्रेम–गीत गाउँदै÷रमाउँदै भन्छन्– ‘प्रेम, प्रेम नै हो। जहाँ जाऊँ, जता टेकूँ, जता हेरूँ, प्रेम नै प्रेम छ।
– गुलाफ टिपूँ, गुलाफको परागमा प्रेम
– गुलाफको रङमै प्रेम
– गुलाफका पत्ता–पत्तामा प्रेम
– गुलाफको कोपिलामै प्रेम
कुन स्नायु ? कुन रगत ? कुन परिश्रम ? कुन पसिना ? चिन्दैन प्रेमले केहीलाई– कसैलाई। शायद यही अर्थमा प्रेम अन्धो छ, केही पनि देख्दैन। अँध्यारो–उज्यालो केही जान्दैन।
– ध्यानमा पनि छवि छ प्रेमकै
– कल्पनामा पनि तस्बिर छ प्रेमकै
– सपनामा पनि आकृति छ प्रेमकै
– विपनाका जहीँतहीँ चर्चा छ प्रेमकै।
प्रेम गर्नेहरूको अर्को कुनै खोज छैन– प्रेमका अलावा। प्रेम गर्नेहरू केवल प्रेम गर्न जान्छन्। प्रेममा नाच्न जान्छन्। प्रेममा हाँस्न जान्छन्। प्रेममै जिउन जान्छन्।
सोचून् त कसैले– प्रेमको अनुपस्थितिमा जीवनको रूप कस्तो हुँदो हो ?
...हैन, कसले गर्याे होला हँ प्रेमको आविष्कार ?
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ १२:०२ शनिबार
प्रेम वृत्तान्त अनुभूति अस्तित्व